ပီတိသုခနှင့် ဝိပဿနာဥာဏ်အကြောင်း - by ကောင်းထက်ညွန့် - Kaung Htat Nyunt Short, Simple and Easy to Remember Dhamma Note, DhammaWeb ပီတိသုခနှင့် ဝိပဿနာဥာဏ်အကြောင်း by ကောင်းထက်ညွန့်
Nissara Horayangura ၏ The path to bliss and wisdom ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
“တရားဘာဝနာ ကျင့်ကြံအားထုတ်ပုံ အားထုတ်နည်းကို သင်ယူရန် အကောင်းဆုံးသောနည်းမှာ ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ အာဂျန်ဗြဟ္မာ(Ajahn Brahmavamso)က ဆိုပါတယ်။ “သိထားတာကို သင်ကြားဝေငှပါ”လို့ ရှေးစကားပုံက ဆိုပြန်သည်။ “နှစ်သက်မြတ်နိုးတာတွေကို သင်ကြားပို့ချပါ” ဆိုတာက ပို၍ သင့်လျှော် မှန်ကန်ပါလိမ့်မည်။ အာဂျန်ဗြဟ္မာကတော့ သိနားလည်ထားတာတွေကို နှစ်သက်မြတ်နိုးစွာ သင်ကြား ပို့ချပေးနေသည်။
“ကျုပ်ကတော့ တရားဘာဝနာမှာ နှစ်ခြိုက်မွေ့ ပျော်ပါတယ်။ ကျုပ်ကြိုက်တာတွေ အားလုံးထဲမှာ တရားအားထုတ်ခြင်းက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တရားအားထုတ်ခြင်းက စိတ်ခွန်အားတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ ပျော်စရာလည်း ကောင်းပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အနှစ်သာရကို နားလည်နိုင်စွမ်းတွေ ရရှိစေနိုင်ကြောင်း” သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အာဂျန်ဗြဟ္မာသည် အင်္ဂလန်၌ မွေးဖွားခဲ့သော ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်၌ သီအိုရီရူပဗေဒ ကျောင်းသားအဖြစ် စာသင်ကြားနေစဉ် အာဂျန်ချား(Ajahn Chah)ရဲ့ ထိုင်းတောရနည်း အတိုင်း ပထမဆုံး စတင် တရားအားထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ အပြင်းအထန် တရားအားထုတ်ခဲ့သည်။ အသက်(၃၃)အရွယ်တွင် ရဟန်းပြုခဲ့ပြီး ယခုအခါ သြစတြေးလျှနိုင်ငံ ဗောဓိဉာဏ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အဖြစ် နေထိုင်လျှက် ရှိသည်။ လေးစားခံထိုက်သော ကမ္မဌာန်းဆရာတစ်ယောက်အဖြစ် လူသိများသည်။ သတိတရား၊ ပီတိသုခထက် သာလွန်သော (Mindfulness, Bliss, and Beyond)ဆိုသည့် ယောဂီလက်စွဲ စာအုပ်ကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။
သူရဲ့သင်ကြားနည်းအရ ပီတိသုခ(bliss)သည် တရားအားထုတ်ခါစ ယောဂီများ စိတ်အား တက်ကြွစေရန်အတွက် အလွန်ရေးပါသည်။ တရားဘာဝနာမှ ပျော်ရွှင်မှု နှင့် စိတ်ငြိမ်သက် ချမ်းမြေ့မှုကို ရရှိနိုင်ကြောင်း၊ စိတ်ဖြုစင်သန့်ရှင်းမှု နှင့် စိတ်ဓာတ် ခွန်အားဖွံဖြိုး တိုးတက်မှုတို့ကို ကိုယ်တိုင် လက်တွေ ခံစားနိုင်ကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့်သော ပီတိသုခသည် လိင်ဆက်ဆံမှုမှ ရသော ကာမအရသာထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း မိန့်ကြားခဲ့သည်။
တရား၏အရသာကို တရားအားထုတ်နေစဉ်အချိန်၌ သာမက အချိန်မရွေး ခံစားနိုင်သည်။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ လေ့ကျင့်တတ်မြောက်ထားရုံဖြင့် မည်သည့်ခြေအနေ၊ အချိန်အခါ မဆို တရားအရသာကို ရရှိခံစားနိုင်သည်။
စာတွေ့ အရ (သုတမယဥာဏ်ဖြင့်) တရားအားထုတ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို လက်ခံနားလည်ကြသော်လည်း လူအများစုသည် ပုံမှန် တရားအားထုတ်မှုကို စတင်လေ့ကျင့်ရန် ခက်ခဲနှောင့်နှေး နေတတ်ကြသည်။ တရား အားထုတ်ခြင်းကို တစ်ခါတစ်ရံမှ အားကစားရုံသို့ တာဝန်တစ်ခုနေနှင့် သွားရောက် လေ့ကျင့်သလိုမျိုး မှားယွင်းစွာ စတင် ပြုလုပ်တတ်ကြသည်။
ဒါပေမဲ့ တရားဘာဝနာမှ ရရှိတဲ့ စိတ်ချမ်းမြေ့မှုကို တန်ဖိုးထားတတ်ခဲ့လျှင် နှစ်သက်စွာ ပုံမှန် တရားထိုင်ဖြစ်မှာပါ။ တရားအားထုတ်ချင်စိတ် အလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာ လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ချက်ခြင်း လက်ငင်း ရရှိနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူး နှင့် ရေရှည်အကျိုးတို့ကို လက်တွေ့ ကိုယ်တိုင် ခံစားရမည် ဖြစ်သည်။
စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေချိန်တွင် တရားထိုင်ရန် တက်ကြွနေတတ်သော ယောဂီများသည် အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး နှင့် အဖက်ဖက်၌ အဆင်ပြေနေချိန်တွင် တရားအားထုတ်ရန် ပျင်းရိ နေလေ့ ရှိသည်။ တရားဘာဝနာကို စိတ်ဝေဒနာများ ဖယ်ရှားရန်အတွက် သာမက စိတ်ကြည်လင်ပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ရန် အတွက်ပါ ကျင့်ကြံအားထုတ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုညွှန်ပြခဲ့သည်။
တရားအားထုတ်ခြင်းကို အလုပ်တာဝန်တစ်ခုအဖြစ် မယူဆဘဲ စိတ်အပန်းဖြေမှု တစ်ခုအဖြစ် ယူဆနိုင်ကြောင်း ရှင်းပြ ပြောဆိုခဲ့သည်။ ” စိတ်ကို ဘယ်လို အပန်းဖြေပေးရမယ် ဆိုတာ အမှန်တကယ် နားလည်ရင် တရားအားထုတ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းပြီး ကြိုက်နှစ်သက်လာမှာပါ”ဟု၍လည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရားအားထုတ်ခြင်းမှာ ခက်ခဲပင်ပန်းမှုဆိုတာ မရှိစေရပါဘူး။ အကယ်၍ ယောဂီတစ်ယောက်က တရားအားထုတ်နေစဉ် ခက်ခဲပင်ပန်းနေပြီဆိုရင် လွဲမှားနေပါပြီ။ ဘာမှားနေသလဲဆိုရင် တည်ငြိမ်မှု(stillness) မရှိခြင်းပါ။
သမာဓိဆိုတဲ့ ပါဋိစကားလုံးကို တရားအားထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် (ပိုမိုတိကျစွာ) စိတ်ကိုအာရုံ တစ်ခုပေါ်၌ ကြာရှည်စွာထားနိုင်ခြင်းလို့ ဘာသာပြန်ဆို နိုင်ပါသည်။ အာဂျန်ဗြဟ္မာ ကတော့ ဘာမှလှုပ်ရှားမှု မရှိတဲ့ စိတ်၏တည်ငြိမ်မှု(stillness)ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ပို၍ နှစ်သက်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်ကိစ္စများ၊ ဖြစ်ရပ်များ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အတိတ် နှင့် လုပ်ကိုင်ဆောက်ရွက်ရန် အစီအစဉ်များနှင့် ပြည့်နေတဲ့ အနာဂါတ် အချိန်တွေကို သွားနေခြင်းမှ စိတ်ကိုရပ်တန့် လိုက်ပါ။ အတွေးတွေထဲမှာ လွင့်မျောနေရာမှ ရပ်တန့် လိုက်ပါ။
ယောဂီရဲ့ စိတ်ကို ပစ္စုပ္ပန် အခိုက်မှာသာ သတိရှိလျှက် ရပ်နားထားလိုက်ပါ။ တစ်စုံတစ်ရာကို ထိန်းချုပ်ဘို့ ကြိုးစားနေတာကိုလည်း ရပ်နားလိုက်ပါ။ ဘာမျှမလုပ်ဘဲ နေလိုက်တဲ့အခါ ”ပြုလုပ်သူ”ဆိုတာ ပျောက်သွားပြီး ”သိနေသူ”ရယ်လို့ သာ ကျန်နေလိမ့်မည်။
တရားအားထုတ်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုတရားအားထုတ်မလဲ ဆိုတာကို အာဂျန်ဗြဟ္မာက ရေထည့်ထားတဲ့ ဖန်ခွက်တစ်လုံးနှင့် ဥပမာပြခဲ့သည်။ ဘောင်ဘင်ခတ်နေတဲ့ ခွက်ထဲက ရေတွေကို တမင်တကာမွှေပြီးတော့ ဒီရေတွေကို ငြိမ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုနေရုံနှင့် ရေတွေက ငြိမ်သက်သွားပါ့မလား။ အလားတူပဲ ယောဂီက ငါတရားထိုင်မယ်၊ ငါစိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်မယ်၊ ငါသမာဓိ ထူထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ ယောက်ယက်ခတ် ဗျာများနေရုံနှင့် စိတ်တွေက တည်ငြိမ် လာပါ့မလား။ ယောဂီ တော်တော်များများဟာ ဒီပုံစံမျိုးနှင့် တရားအားထုတ်နေကြတာပါ။ ဒီနည်းနဲ့ ရေတွေ မငြိမ်သွားသလို၊ သမာဓိ မဖြစ်လို့ ယောဂီတွေလည်း တစ်စတစ်စ စိတ်ပျက်သွားကြတာ များပါတယ်။
နည်းစနစ် အမှန်ကတော့ ရေခွက်ကို အောက်သို့ ချထားလိုက်ပါ။ ချချခြင်း ခဏမှာတော့ ရေတွေက ဟိုဘက်ဒီဘက် ပို၍ ဘောင်ဘင်ခတ် နေလိမ့်ဦးမည်။ တအောင့်အကြာမှာ ရေတွေ အားလုံး လုံးဝ ငြိမ်သက်သွားပါလိမ့်မည်။ ရေခွက်ကို ကိုင်ထားပြီးတော့ ဘယ်နည်းနှင့်မျှ ရေတွေ ငြိမ်သက်အောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
တရားဘာဝနာ ပွားများအားထုတ်ရာမှာ ဒီဥပမာကို သင်ခန်းစာ ယူသင့်သည်။ တစ်ခုခုကို ဆုတ်ကိုင်ရင်း တရားအားထုတ်၍ မရနိုင်ပါ။ ရှေးဦးစွာ အယူဝါဒစွဲတွေ၊ စိတ်ကူးတွေ၊ အတွေးတွေ အားလုံးကို လွှတ်ချလိုက်ပါ။ ခဏတော့ စိတ်မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေလိမ့်မည်။ အားလုံးကို လွှတ်ချနိုင်ပြီး၊ စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ဘို့ ကြိုးစားနေတာကိုလည်း စွန့်လွှတ်လိုက်နိုင်တာနှင့် တပြိုင်နက် တရားအားထုတ် ရတာ အလွန်လွယ်ကူလာပါ လိမ့်မည်။
အာရုံခံစားတတ်သည့် စိတ်ဟာ ငြိမ်သက်လာတာနှင့်အမျှ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ပြည့်ဝလာပါလိမ့်မည်။ ခွန်အားပြည့်ဝသည့်စိတ်သည် ပျော်ရွှင်မှု(joy)ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အဲဒီချိန်ကစပြီး တရားဘာဝနာ၏ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မူ(happiness)တွေကို စတင်ခံစားနိုင်ပါပြီ။
စိတ်တည်ငြိမ်မှုက ဝိပဿနာဥာဏ်ကို ဦးဆောင်ပါသည်။ စိတ်သည် တည်ငြိမ်ပြီး၊ တိတ်ဆိတ်လာသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သူ့အလိုလို အရာရာကို ရှင်းလင်းမှန်ကန်စွာ ရူမြင် တတ်လာပါလိမ့်မည်။ ဖားလောင်းကလေးက သူရဲ့ရေအိုင်ထဲက ရေတွေအကြောင်း၊ ဘယ်အချိန်မှာ၊ ဘယ်လိုမျိုး ဖားငယ်ကလေး ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာ သိသလို ရှိသင့်ရှိထိုက်သည့် သမာဓိအဆင့် ရှိသည့် ယောဂီသည် ဘယ်လိုတွေးမျိုးတွေ ဝင်လာတယ်၊ ဘာတွေနှင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်၊ ဘာတွေကို တက်မက်နေတယ် ဆိုတာ အလိုလို သိမြင်လာပါလိမ့်မည်။
အဆင့်မြင့်သည့် သမာဓိ(အပ္ပနာသမာဓိ)ကို ထူထောင်နိုင်ခြင်းသည် တောနက်ထဲက ပစ်ရမစ်ပေါ်သို့ တက်ကြည့်ရသည်နှင့် တူသည်။ တောနက်နှင့် တူသည့် အတွေးတွေ၊ စ်ိတ်ကူးတွေ၊ မိသားစု တာဝန်တွေ၊ အလုပ်ဝတ္တရားတွေ၊ လုပ်ငန်းကိစ္စတွေ အားလုံးကို ပစ်ရမစ်ပေါ်ကနေ အရှိအတိုင်း(သဘာဝအတိုင်း) တွေ့မြင်နိုင်သည်။
အမျိုးမျိုးသော ကမ္မဌာန်းကျောင်းများက မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်ရရှိရန်အတွက် မတူညီသော သမာဓိအဆင့် အမျိုးမျိုး လိုအပ်သည်ဟု သင်ကြားပေးကြသည်။ တချို့သော ကမ္မဌာန်း ကျောင်းများသည် ဈာန်ဆိုက်သော အဆင့်မြင့်သမာဓိထက် ခဏိက သမာဓိကို ပို၍ အလေးထား သင်ကြားပေးကြသည်။
တချို့သော ကမ္မဌာန်းဆရာတော်များက ဈာန်သမာဓိ(အဆင့်မြင့်တဲ့သမာဓိ)မှ ရရှိသောပီတိသုခသည် တွယ်တာမက်မောလွယ်သဖြင့် တားမြစ်လေ့ရှိသည်။ ယောဂီအများစုသည် မဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်ကိုသာ ရည်ရွယ်တောင့်တသောကြောင့် ဈာန်သမာဓိကို ဖယ်ရှားလေ့ရှိသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အံသြနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော အချက်မှာ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်းကို လိုလားစွာ လက်ခံခြင်း ဖြစ်သည်။ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ အတင်းအကြပ် လက်ခံခိုင်းခြင်း မပြုလုပ်ပါ။
တောရဆောက်တည်၍ အချိန်ပြည့် တရားဘာဝနာပွားများသော ရဟန်းတော်များ သာမက သူ၏ တရားစခန်းရှိ လူယောဂီအများစုသည် ဈာန်ဆိုက်သော အဆင့်မြင့်သမာဓိကို အောင်မြင်စွာ ထူထောင် နိုင်ခဲ့ကြသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓက သူ၏ အဆုံးအမများ၌ ဈာန်ဆိုက်သည့်သမာဓိကို အမှန်တကယ် လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများ၌ သမာဓိ လိုအပ်သည်ဟု လက်ခံကြသော်လည်း ယခုအခါ ကွဲလွဲချက်များရှိနေသည်။
ထူထောင်ရမည် သမာဓိအဆင့်အတန်းကို အမျိုးမျိုး ကွဲလွဲစွာ ယူဆကြသည်။ အာဂျန်ဗြဟ္မာကတော့ သမာဓိမှ ရရှိသည့် ပီတိသုခ၏ ငြိတွယ်မှု အန္တရာယ်ကို ကြောက်စရာမလိုကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ သမာဓိ၌ ပျော်မွေ့လေ့ရှိသော ယောဂီတစ်ယောက်သည် သောတာပန်၊ သဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်နှင့် ရဟန္တာတို့၏ သွားရာလမ်းတစ်ခုခုကို မျှော်လင့်နိုင်သည်။
သမထနှင့် ဝိပဿနာအကြောင်း စကားရည်လုပွဲများသည် တရားအားထုတ်ခါစ သို့မဟုတ် တရားအားထုတ်ရန် လေ့လာနေသည့် ယောဂီအသစ် တစ်ယောက်အား လွဲမှားသော နားလည်မှုများ ဖြစ်စေသည်။ သမထ နှင့် ဝိပဿနာသည် အဆက်အစပ်မရှိသော၊ ကွဲပြားသော အားထုတ်ခြင်း တစ်မျိုးစီဖြစ်ကြောင်း တစ်ချို့သော ကမ္မဌာန်းကျောင်းများ၌ သင်ကြားပေးကြသည်။ အဆင့်မြင့် သမာဓိကို ထူထောင်ခြင်းသည် သမထကျင့်စဉ်ဖြစ်ပြီး မည်သည့် ဝိပဿနာဥာဏ်ကိုမျှ မရရှိနိုင်ပါ ဟုသော အဆိုကို အာဂျန်ဗြဟ္မာက လက်မခံနိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ တစ်ကြောင်းတည်းသော လမ်း၏ မတူညီသောအကျင့် တစ်မျိုးစီသာဖြစ်ပြီး သမထ(အဆင့်မြင့်သမာဓိ)သည် ဝိပဿနာဥာဏ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဦးဆောင်ပြီး၊ ဝိပဿနာအကျင့်ဖြင့် အဆင့်မြင့်သမာဓိကို ရရှိစေနိုင်သည်။
များပြားလှသော တရားအားထုတ်နည်းများ၊ ဝိဝါဒ ကွဲပြားမှုများ၊ ကွဲလွဲသော အယူအဆများသည် အားထုတ်ခါစ ယောဂီအသစ်တစ်ယောက်အား ရောရောထွေးထွေး ဇဝေဇဝါ ဖြစ်စေပြီး နားလည်ရန် ခက်ခဲစေသည်။ အာဂျန်ဗြဟ္မာ၏ အကောင်းဆုံး အကြံပေးချက်မှာ သင့်ကိုယ်တိုင် စတင် တရားအားထုတ် ကြည့်ပါ။ သင့်၏ ကိုယ်ပိုင် အတွေ့ အကြုံမှ တစ်ဆင့် ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ အလိုလို သိလာပါလိမ့်မည်။
စာအုပ်မြောက်များစွာကို အဖတ်များပြီး တရားထိုင်ချိန် နည်းခြင်း နှင့် အငြင်းအခုံများပြီး ဝစီပိတ်မနေတတ်ခြင်းတို့သည် အဆိုးဆုံး ပြဿနာများ ဖြစ်ကြသည်။ စဉ်းစား တွေးခေါ်ခြင်းဖြင့် ဝိပဿနာဉာဏ်ကို မရရှိနိုင်ပေ။ သို့သော် ဝစီပိတ်အကျင့်ဖြင့် ဝိပဿနာဉာဏ်ကို ရရှိနိုင်သည်။
(၁)	စတင် တရားအားမထုတ်ခင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှ အကြောများကို လျော့ချလိုက်ပါ။ ထို့နောက် ခန္ဓာကိုယ်မှ အကြောများ ပြေလျော့သွားသလိုမျိုး စိတ်ကိုလည်း သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင် လျော့ချ(relax) လိုက်ပါ။
(၂)	ဘာကိုမျှ ရရှိလာအောင်၊ ဖြစ်လာအောင် မကြိုးစားပါနှင့်။ ဘာကိုမျှလည်း ပျောက်ပျက်သွားအောင် ဖျက်ဆီးဘို့ မကြိုးစားပါနှင့်။
(၃) ဘာကိုမျှလည်း တမင်တကာ မလုပ်ပါနှင့်။ မိမိရဲ့စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစားလေ စိတ်ကပိုပြီး ခက်ထန်လာလေ ဖြစ်လိမ့်မည်။ စိတ်က ပို၍ ခက်ထန်မာကြောလာလေ သမာဓိရရန် ပိုခက်လေ ဖြစ်လိမ့်မည်။
(၄)	မိမိကိုယ်ကို ကြင်နာသနားပါ။ သိမ်မွေ့ ငြင်သာစွာ လေ့ကျင့်ပါ။ တရားကို သိမ်မွေ့ ငြင်သာစွာ အားထုတ်တတ်သည့် အကျင့်ကောင်း မွေးမြူပါ။ ကိုယ်နှင့်စိတ်ကို အားကုန်နှိပ်စက်သလိုမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ အရမ်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် အားမထုတ်ပါနှင့်။ ဆန္ဒလည်း မစောပါနှင့်။ ငြင်သာသိမ်မွေ့ သော တရားအားထုတ်ခြင်းကသာ လျှင်မြန်စွာ တရားရကြောင်း ဖြစ်သည်။
(၅)	ဘယ်လိုနည်းမျိုးနှင့် တရားအားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကို အလေးထားပါ။ ဘာတွေကို ဘယ်လိုမျိုး ကြုံတွေ့ ရမယ်ဆိုတာ ဂရုမပြုပါနှင့်။ လွဲမှားလေ့ရှိသည့်အချက်တစ်ခုမှာ ယောဂီအများစုသည် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနှင့် ရှုရမယ်ဆိုတာ သို့မဟုတ် အရှုခံအာရုံတွေက ဘာတွေဆိုတာထက် ဘာတွေ တွေ့ ရမယ်၊ မြင်ရမယ်၊ ဆိုတာကို အာရုံစိုက် နေတတ်ကြသည်။
(၆)	မေတ္တာဘာဝနာ ပွားများပါ။ ကိုယ်နှင့် စိတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နှစ်သက်တဲ့ခံစားမှု သို့မဟုတ် နာကျင်တဲ့ခံစားမှု၊ စိတ်တည်ငြိမ်မှု သို့မဟုတ် စိတ်ပျံလွင့်မူ၊ တက်ကြွနိုးကြားမှု သို့မဟုတ် အိပ်ချင်ငိုက်မြည်းမှု တွေအားလုံးကို လက်ခံရှုမှတ်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားပါ။
(၇)	သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့ အကျင့်တို့ မျှတပါစေ။ သီအိုရီသည် မြေပုံနှင့် တူပြီး လက်တွေ့ အကျင့်ကတော့ လမ်းပြမီး နှင့်တူသည်။ ရတနာသိုက် ရှာဖွေသည့်အခါ နှစ်ခုစလုံး လိုအပ်ပြီး သင့်လျှော်သလို အသုံးချရန် ဖြစ်သည်။
(၈)	ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ တရားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။
Ajahn Brahmavamso, Saturday, June 12, 2010
Saturday, June 12, 2010Ajahn Brahmavamso:
8) Enjoy meditation! ( forword mail ) Ashin Mu Nain Da Magadh University Bodh Gaya Bihar State India.
(ပီတိသုခနှင့် ဝိပဿနာဥာဏ်အကြောင်း) by Kaung Htat Nyunt (ကောင်းထက်ညွန့်)